Heerka Sarrifka Oo shilin Soomaali (SOS) In US dollar (USD) ku nool suuqa sarrifka Forex
Heerka sarrifka Forex simay: 24/05/2022 12:22
Oo shilin Soomaali si Dollar qiimaha hadda suuqa sarrifka Forex ee 24 May 2022
12:22:18 (Update heerka Forex ee 59 seconds)
1 USD = 583.50 SOS
Oo shilin Soomaali qiimahoodu US dollar iyadoo la beddelayo 30-sekan kasta. Ugu dhakhsaha badan khadka tooska ah Oo shilin Soomaali sicirka. Isla markiiba Oo shilin Soomaali to US dollar sicirka sarrifka. Qiimaha Oo shilin Soomaali to US dollar hadda iyo waqtiyo kala duwan.
Shaxda ganacsi Forex US dollar - Oo shilin Soomaali ku nool yihiin, 24 May 2022
Shaxda ganacsi Forex Oo shilin Soomaali In US dollar ku nool yihiin, 24 May 2022
Adeegso shaxda sarrifka ee Oo shilin Soomaali to US dollar dusheeda 24 May 2022. Qariidada, waxaad si dhaqso ah u aragtaa kor u kaca ama dhicitaanka lacagta. Qariidada ayaa ah mid isdhaafsan, waad kufiirin kartaa. Garaafka Oo shilin Soomaali ee ku US dollar si otomaatig ah ayey isu beddeshaa 30 sekan kasta.
Beddelaan Oo shilin Soomaali In US dollar Oo shilin Soomaali In US dollar Heerka Sarrifka Oo shilin Soomaali In US dollar taariikhda qiimaha sarrifka
Ganacsi Online Oo shilin Soomaali (SOS) si US dollar xilligan
Daqiiqad kasta waxaan raadraacnaa heerka sarrifka. Dhaqdhaqaaqa Oo shilin Soomaali ( SOS) ku US dollar daqiiqaddan. Taariikhda sarrifka daqiiqadaha ugu dambeeya ayaa lagu muujiyey jadwalka. Qiyamka Oo shilin Soomaali daqiiqaddii ayaa miiska la dhigaa si ay ugu fududaato in la arko farqiga.
Ganacsi Online Oo shilin Soomaali (SOS) si US dollar ganacsi ee la soo dhaafay saac
Taariikhda Oo shilin Soomaali ilaa US dollar saacad kasta. -0.0000 USD saacaddiiba way dhimatay Oo shilin Soomaali ( SOS) ku US dollar. Goobtu waxay muujineysaa miis loogu talagalay soo dhejinta 10 saacadood ee Oo shilin Soomaali ee ku US dollar saacad kasta. Ka eeg xogta sicirka bedka 10 saacadood shaxda ku taal boggan.
Ganacsi Online Oo shilin Soomaali (SOS) si US dollar arrimuhu maanta 24 May 2022
12:22 11:22 10:22 09:22 08:22 07:22 06:22 05:22 04:22 03:22